Dawladda Imaaraadka oo Xoriyaddiisa u soo celisay Cismaan Buur-madow iyo sababta ka danbaysay xadhigiisa | Berberanews.com
Home WARARKA Dawladda Imaaraadka oo Xoriyaddiisa u soo celisay Cismaan Buur-madow iyo sababta ka...
Dawladda Imaaraadka oo Xoriyaddiisa u soo celisay Cismaan Buur-madow iyo sababta ka danbaysay xadhigiisa
Dubai-(Berberanews)- Dawladda isu-taga Imaaraadka, ayaa xoriyaddiisii saaka u soo celisay ninka boqornimmada sheegta ee Cismaan Maxamuud Buurmadaw oo muddo affar todobaad ku dhaw ku jiray xabsi ku yaal magaalada Dubai.
Ciidammada ammanka madaarka Dubai, ayaa xabsiga dhigay Buurmadow ka dib markii uu soo dhammaystay gudashada waajibaadkii xajka sanadkan, kaasoo aan dawladda Imaaraadku wax war ah ka bixin sababaha keligay xadhigiisa.
Warar madaxbannaan oo aanu ka helay xadhiga Buurmadow, ayaa sheegaya in Dawladda Imaaraadku ka war heshay lacag dhan shan milyan oo dollarka Maraykanka ah oo ku jirta Akoonkiisa gaarka ah, ka dib markii uu lacag u qoray nin ay qaraabo yihiin oo kula kulmay Dubai, taasoo keentay in xayiraad la saaro akoonka Buurmadow, isagana xabsiga loo taxaabay.
Warku waxa uu intaa ku darayaa in Dawladda Imaaraadku aaminsantahay lacagta shanta Milyan ahi inay ka mid tahay lacagaha Maamulkii xukunka Milateri awooda lagaga tuuray ee dalka Colonel Qaddaafi iyo qoyskiisu dhigteen baananka shakhsiyaadka iyo masuulliyiinta ay saaxiibtinimmada gaarka ahi ka dhaxaysay, sidaa daraadeedna ay Dawladda Imaaraadku hore uga war haysay xidhiidhka saaxiibtinimmo ee Buurmadow la lahaa qoyskii maamuli jiray Dalka Liibiya, lacagtana uu u soo diray mid ka mid ah wiilashii Qaddaafi dhalay ee maalmihii u danbeeyay wax yar ka hor dilkii aabahood baxsaday.
Cismaan Maxamuud Buurmadaw oo muddooyinkii u danbeeyay debed wareeg ku ahaa dalalka debedda, mucaaridad iyo cambaarayn joogto ahna warbaahinta u mariya xukuumadda Madaxweyne Axmed Silaanyo waxa sii dayntiisa qayb ku lahayd dawladda Eithopia oo salladiin, siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin beeshiisa ka soo jeeda ka codsadeen inay wax kala qabato sidii loo sii dayn lahaa, kuna guulaysatay in saaka la sii daayo.
Cismaan Buurmadow, ayaa 19kii November ee 2011 ka hadlay qabashada Seef Al-islaam Qaddaafi, oo ahaa wiilkii curad ee hoggaamiyihii la dilay ee Libiya Col. Qaddaafi oo ay kooxaha mucaaridku gacanta ku dhigeen,ayuu Buurmadow oo xidhiidh saaxiintinimmo ka dhaxaysay qoyska hoggaamiyihii mudada dheer xukumayay dalka Libya Col. Qaddaafi ka hadlay shakhsiyadda Seef Al-islaam iyo waxyaabihii uu ka yaqaanay, “Waan isnaqaanay, aabihii baanu isku baranay, dhawr jeer baanu kulanay; wuxu ahaa ninka labaad ee caruurtiisa ugu weyn. Wuxuu ahaa ninka qudha ee toosinta aabihii ka shaqaynayay intii uu siyaasadad ku jiray wax badan buu qabtay.” Ayuu yidhi Buurmadow oo u warramayay BBC-da.
Buurmadow waxa uu sheegay in Seef Al-islaam ahaa nin aaminsan siyaasadda furfuran “Waa nin wax badan sammeeyey; waxa uu wax kala qabtay aabihii oo ay dhawr jeer isku dhaceen safiirkii Ingiriiska, 2003 buu siyaasadda soo galay, marar baa jirtay Libya dimuqraadiyad bay u baahantahay uu yidhi. waxa uu kuguulaystay sii daynta hablo ajaanib ah oo dalka gudihiisa ku xidhnaa.”
Previous articleShir Taleex ka furmi lahaa oo in lagu kala dareero qarka u saaran
Next articleHambalyo aroos Wacan